Allgedo.com » 2012 » April » 27
Home » Archive Daily April 27th, 2012 Ururka SASDO oo Siminaar hormarinta Nabadda iyo Xallinta Khilaafaadka ugu qabtey Odayaal dhaqamed Magaalada Caabudwaaq (Sawiro) Apr 27, 2012 Siminaar heer sare ah oo uu qaban qaabiyey Xafiiska Ururka SASDO ee Magaalada Caabudwaaq ayaa waxaa lagu qabtey Magaalada Caabudwaaq ee Gobalka Galgaduud.
Seminaarkaan ayaa ahaa mid loogu tala-galay Odayaal dhaqameedka Deegaanka Caabudwaaq iyo deegaannada kale eek u xeeran Magaalada Caabudwaaq.
Seminaarkaan ayaa wuxuu ku saabsanaa hormarinta nabadda iyo xallinta khilaafaadka oo lagu barayey Odayaasha... Wargelin Muhiim ah: Xagee wararka iyo maqaalada Shabakadda Allgedo Online loogu soo diri karaa? Fadlan akhri wargelinta oo dhan. Apr 27, 2012 Dhamaan akhriste-yaasha Allgedo Online, Hay’adaha dowliga iyo kuwa aan Dowliga aheyn ee mudada dheer Allgedo ku xirnaa, isla markaana wararka iyo maqaaladaba usoo diri jiray waxaa lagu wargelinayaa in wixii ka danbeysa April 30, 2012 ay wararka iyo maqaalada ay rabaan in ay Allgedo kusoo baxaan ay si toos ah ugu soo diri karaan oo kaliya labada email ee shabakadda oo kala ah: allgedo@allgedo.com... Barnaamijka Dareenka Shacabka iyo siyaasiga ee Hctv oo dood u qabtey Somalia iyo Somaliland (Daawo Video) Apr 27, 2012 Barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga ee ka baxa Hctv habeenimada Talaadada ayaa dood kulul u qabtey aqoon yahano, siyaasiyiin iyo odayaal kasoo jeeda Soomaaliya iyo Somaliland, doodaas oo aad loogu dheeeraadey sida uu ku hirgeli karo wada hadalkii 23-02-12 loogu baaqay ineey soomaalidu wada hadasho iyo sida looga gudbi karo carqaladaha wada hadalkii burburin kara ayaa u dhacdey sidaan, iyadoo... Maamulka SCS oo dalbaday in si deg-deg ah loo siidaayo dadka Muqdisho ku xiran. Apr 27, 2012 Maamul goboleedka Bartamaha Somalia (SCS) wuxuu si deg-deg ah uga dalbanayaa DKMG ee Somalia in ay xoriyadoodu u soo celiso saddex qof oo midi ay haweeney tahay, labada kalana rag, kuwaasoo ku xiran magaalada Muqdisho, iyadoo lagu eedeynayo qaraxii Tiyaatarka.
SCS waxay ogtahay in aysan jirin cadeymo muujinayo eedaha loo heysto dadkan oo ka shaqeynayey xafiiska ra’iisal wasaaraha, lana rumeysan... Wariyeyaashii ku Dhaawacmay Qaraxii Tiyaatarka oo loo Qaaday Dalka Jabuuti Apr 27, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa maanta qaaday ilaa afar wariye iyo abwaan kamid ah fanaaniinta qaranka Soomaaliya kuwaasoo dhawaan ay dhaawacyo halis ah kasoo gaareen qaraxii ka dhacay Tiyaatarka.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya Mudane C/laahi Bile Nuur oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa sheegay in safaaradda... Prof. Dalxa oo ka Codsaday Dowladda in Wax loo Qabto Dhaawacyadii Qaraxii Tiyaatarka Apr 27, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Proff: Max’ed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa ugu baaay dowladda Soomaaliya in ay wax u qabato dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay Tiyaatarka Qaranka, kuwaasoo lagu daweynayo qaar katirsan isbitallada Muqdisho.
XIldhibaanka ayaa sheegay in ay jiraan dad ku waxyeeloobay qaraxii Tiyaatarka oo ay xaaladooda aad u liidato... MIdowga Afrika oo Sheegay in Dhawaan ay Howlgalladooda ku Fidin Doonaan Dalka oo Dhan Apr 27, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in dhawaan ay howlgalladooda ku ballaarin doonaan guud ahaan dalka Soomaaliya, islamarkaasina ay xoogagga Al-shabaab ka xoreyn doonaan gobollada ay ku suganyihiin ee koonfurta Soomaaliya.
Ergayga Gaar ah ee Midowga Afrika u qaabilsan SOomaaliya Ambass: Boubacar Gaoussou oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada AMISOM oo kaashanaya... Al-shabaab: Waa Dil Cidii Ansixisa Dastuurka Cusub Apr 27, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xoogagga Al-shabaab ayaa ka digay ansixinta dastuurka Cusub ee qabyo qoraalka, iyagoona sidoo kale ku goodiyay in ay dili doonaan cidii ka qeybqaadatay ansixinta dastuurka Cusub.
Sheekh Cali Max’uud Raage (Cali Dheere) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dastuurka cusub uu yahay mid kahor imaanaya shareecada Islaamka, wuxuuna sheegay in uusan ka shaqeyn doonin... Radio Allgedo/ Waraysiyo